Immisa Jeer Ayeynu Bilownay Hawl oo Aynan Dhammays-tirin? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Immisa jeer ayeynu bilownay hawl oo aynaan dhammays-tirin? aad ayay u badantahay haddii aynu runta sheegno, inta aynu ku guuleysanaana wey yartahay, wax kastaa bilowga wuu qurux badan yahay, laakiin marka aad xaqiiqada u dhaadhacdo waxaa jira caqabado badan oo kaa hor imanaya mararka qaar kallifa in hawsha qabyo la gagatago sidaasi daraaddeed waa in ay jiraan wax kuu suurto gelinaya in aad hawsha macaansatid, marka furaha guushu ama horumar ka naftu waa dhiirri-gel in ay jirto sikastaba ha ahaatee ma jiro qof meel taagnadaa ee nolosheenna caadiga ahi way is bedbeddeshaa oo haddii aad maalin dedaasho oo naftaada horumariso maalin aya aad haddana hoos uu dhacaysaa, haddaba sita meesha looga saaro waa in aad la timaaddaa qodobadan hoos ku xusan.
Immisa Siyaabood ayaa aad naftaada ku dhiirri gelin kartaa?
Naftaada heshiis la gel: Heshiiska aad naftaada la gelaysid waxa uu noqon Karaa mid yar ama mid weyn.Tusaale ahaan, naftaada waxa aad ku tidhaahdaa haddii laba bog oo quraan ah aan qaybo casho qaali ah ayaa aan caawa suuqa ka cunaya.
Iska dhig qof markiisa hore dhiirran: Hadday jirto hawl aanad ku dhiiranayn in aad qabatid ama caajis ku hayo waxaad markaaga hore si nafsaniyad ah naftaada uga dhigtaa qof xiiso hawsha u haya.Waxa la yaab leh isla daqiiqado gudahood niyaddaadu wey isbeddelaysa oo xiisaa ku gelaya.
Waxa aad ka bilowdaa wax yar, kaddibna hore u soco: Waxa aad ka bilaabi kartaa oo kaliya in aad miiska aad wax ku akhrisanaysid iska habayso ama masaxdo ama aad agagaarkaaga iska nidaamiso, marka aad in taa qabatid waxa ku helaya darreen ah in aad wax qabatay kaddibna hore ayaad uga socon kartaa ama hawshaada u gudo geli kartaa, Hawshaada inta ugu culus ama ugu adag ka bilow: marka aad isdhaafisid ama qabatid hawsha ugu culus ama ugu adag aad maalinta leedahay isla markiiba waxa aad dareemaysaa in aad fududaatay. Naftaada cid aan ahayn ha barbar dhigin: marka aad naftaada aad barbar dhigtid qof kale wixii dhaawac u geynsan karaa kalsoonidaada iyo dhiirranaantaada, waayo mar kasta waxa jira qof kaa guulo badan. Waxa habboon in aad naftaada oo keliya is barbar dhigtid, sannadkan sanadkii hore maxaa isbeddel naftayda ku yimi iyo maxa aan horumar gaadhay.
Xasuuso guulaha aad gaadhay: Waxa si fudud loo ilaabi karaa guulaha aad gaadhay waxana qofkasta ku soo laabta guuldarrada kaga timi nolasha. Marka si aad horumar noloshaada u gaadhid waa in aad labadan kala beddeshid oo xasuusnaata guulaha aad gaadhay.
Ku dayo dadka wanaagsan: Ma leedahay qof aad higsatiid ama aad jeceshahay sifaadkiisa? Waxa noloshaada beddeli kara ama kobcin kara in aad dadka sifaad ka wanaagsan kaga dayatiid.
Ha ka baqin guul darrada: Guul darradu waa qayb ka mid ah nolosha wa cashar ka mid ah casharada nolosha, ha ku noqoto tixraaca guushaada, mustaqbalkaaga. Baadhitan ku sii samee hawshaad qaban doontid: marka aad baadhitan si samaysid hawl aad qabandoontid ama aad wayddiisid dad hortaa hawshan qabtay, waxa aad ka sii baaraan-dagi karta dhibaatooyinka kaa horimaan kara, Laakiin yaanu noqon wax ku niyad jabiya marka aad maqashid dhibaatooyinka kaa hor-imaan kara. Waa in aad garataa asbaabta aad hawshan u qabanaysid: haddanad ogeyn sababaha aad hawshan u qabaanaysid ama aanad lahayn asbaabo adag o ku qaancisay wuxu kugu keeni kara in aad hawsha caajis badan ka muujisid.
Ku dedaal mar kasta niyaddaada iyo fikirkaagu in uu noqdo mid dhinaca wacan wax ka eega: Haddaad wanaag ka fikirtid iyo in aad wanaag samaysid niyadaadu waxa ay noqonaysa mid farxad badan. Illaahay ayaa qoray qaddarka markaa waa in uu noqda mid aad mar kasta ku qanacsantahay.
Facebookga iska yaree: Facebook-gu waxa u noqday waxa ugu wakhti lumis badan, ku dedaalin aad yareysid haddanad goyn karayn, waxana kuula talinayaa dhallinyarta Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan in ay isticmaalka facebook ayna wakhti badan isaga lumin.
Hawsha qayb-qaybso: Hawshaad leedahay marka aad qayb-qaybsato waxa ay noqonaysa mid dhib yar, Waa in aad u yeesha tallaabooyin qorshaysan, Is wayddii waxa ugu horreeya waa maxay iyo tallaabooyinka xiga. Marka aad samaysid liis ama shax hawleed aad ku maamushid hawshaada waxa ay ka yareynaysa baahsanaan ku soo waajihi karta. Mar kasta oo tallaabo ku guulaysato naftaada dhiirranaan ayaa gelaysa oo kugu dhiirranaysa tallaabooyinka kale.
Adeegso awoodada maskaxeed ee rabi ku siiyey: soo qaado xaashi cad iyo qalin, kaddibna xagga sare ku qor qayb noloshaada ka mid ah, oo aad rabtiid in aad wax ka beddeshid, kaddibna qodobee fikradda halka aad isleedahay haddaad ku camal fashid in uu qaybaha noloshaada kor u qaadayo. Waxa aad qorta ugu yaraan 20 qodob, ka dibna raaci 10 qodob oo kale.
Qodobada aad qortay kama dhiigna in ay wada saxanyihiin ama dhammaantood wada wanaagsan yihiin, laakiin qasab maha waxa ka soo bixi doona, qaabkan waxa aad ku baran kartaa sida fikrado badan loola soo baxo. Waxa aad dhagaysaata maxaadarooyiin iyo khudbado naftaada kobcinaaya: waxa jira muxaadarooyiin badan ama khudbado internetka ka buuxa oo ku dhiirrigelin kara.
Beddel qaabka aad u fikirtid: qofkastaba sibuu u fikiraa waxa aad isku daydaa in aad beddeshid qaabka aad u fikirtid haddaad u aragto in aannu ahayn mid lagu horumarayo ama caqabad noloshaada ku ah.
Tags: Immisa Jeer Ayeynu Bilownay Hawl oo Aynan Dhammays-tirin?
Next post Wakhtigaaga Illaasho, Beddel Hab Fikirkaaga
Previous post Samee Arrimahan Si'aad u Noqoto Qof Hormuuda